Ukubaluleka kokuma ngokuchanekileyo xa usebenzisa iPC | Iindaba zeGajethi
Abakho bambalwa kuthi abachitha iiyure ezininzi behleli phambi kwescreen sekhompyuterNokuba ilaptop okanye idesktop, inyani kukuba kumaxesha amaninzi sikwenzela ukonwaba nje ngaphandle kwesibophelelo. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba siqale ukuthathela ingqalelo ukubaluleka kokugcina ukuma ngokuchanekileyo xa sisenza imisebenzi yethu phambi kwekhompyuter.
Nangona kunjalo, la manyathelo asisiseko kunye nezikhokelo azaziwa kuwo wonke umntu. Ke ngoko, siza kuthetha kancinci malunga nokubaluleka kokuma kakuhle xa usebenzisa iPC. kunye neengcebiso ezilula ukuyenza.
1 Ukubaluleka kwendawo
2 Ukuma phambi kwePC
Kubalulekile ukuba ukukhanyisa ngokubanzi kwegumbi esiphambi kwePC Ikhanyiswe kakuhle, ukuba kunokwenzeka ukukhanya kwendalo, njengoko kuya kusenza sizive sisebenza ngokwasemphefumlweni kwaye kuya kusibangela sidinwe kancinci. Ubuncinane bokukhanya kufuneka bujikeleze 500 lux. Ukongeza, ukubeka iPC ngaphambili okanye ngasemva kwefestile kunokubangela iimeko ezingathandekiyo xa ujonga isikrini ngokuchanekileyo, kunye nokufumana ubushushu obujikeleze iifestile. 22 kunye nama-26 degrees. Ezi zizinto ezisisiseko zokusingqongileyo.
Ukuma phambi kwePC
Isitulo esihle sisitshixo, kodwa ayisiyiyo yonke into. Kuyacetyiswa beka iinyawo zakho ngokuqinileyo emhlabeni ukusebenzisa izitulo ezinokuhlengahlengisa ezisivumela ukuba sikhululeke Ukuba nemilenze yokuzingela kunokukhokelela ekonzakaleni kwixesha elizayo. Ngokufanayo, kufuneka Xhasa umva ngokupheleleyo kwi-backrest ngokulinganayo, ukunqanda ukujija nokuba secaleni. Ukugqiba imfundo yokuma kufuneka sigcine izandla, izihlahla kunye neengalo kwindawo yokungathathi hlangothi ngokungqinelana netafile. Abasebenzisi abaninzi abayisebenzisi indawo yokubamba iingalo, kodwa kubalulekile ukuphumla izihlahla xa singazisebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukubaluleka kokuma ngokuchanekileyo xa usebenzisa iPC
URandy jose sitsho
Impazamo yokungenisa iphepha
Phendula uRandy Jose